Ubuntu 21.04 भोलि समर्थन समाप्त हुनेछ। जब तपाईं सक्नुहुन्छ अपडेट गर्नुहोस् | ubunlog
केहि समय पहिले मैले एउटा राय पढें जुन मलाई याद छैन कि क्यानोनिकलले मात्र LTS संस्करणहरू जारी गर्नुपर्नेछ भनेर कहाँ वा कोबाट भने। यो ती ठाउँहरूमा छ जहाँ सबै चीजहरू अधिक पालिश छन्, र बाँकीमा जहाँ ताजा समाचारहरू थपिन्छन् र जहाँ साना समस्याहरू हुन सक्छन्। मलाई लाग्दैन कि त्यो कहिल्यै हुनेछ, र हामीसँग प्रत्येक छ महिनामा नयाँ संस्करण जारी रहनेछ, ती मध्ये तीन9महिनाको लागि र प्रत्येक दुई वर्षमा एउटा5वर्षको लागि समर्थित। Ubuntu 21.04 अप्रिल २०२१ मा जारी गरिएको थियो, र यदि तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाइँलाई थाहा छ कि यो थोरै जीवन बाँकी छ।
कोडनाम हिर्सुट हिप्पो, Ubuntu 21.04 ले नयाँ सुविधाहरू प्रस्तुत गर्‍यो, तर क्यानोनिकलले GNOME 3.38 सँग टाँसिने निर्णय गर्‍यो किनभने तिनीहरूले महसुस गरे कि तिनीहरूको अपरेटिङ सिस्टमको सहज रूपमा चलाउनका लागि चीजहरू अझै तयार छैनन्। द यसको जीवन चक्रको अन्त्य भोलि, जनवरी २० मा आइपुग्छ, त्यसैले, पहिले नै त्यसो नगर्नेहरूका लागि, अब अपरेटिङ सिस्टम अपडेट गर्ने राम्रो समय हो। कुन संस्करणमा? खैर जवाफ सरल छ।
Ubuntu 21.04 जनवरी 20 मा "मर्नेछ"
हामीले LTS संस्करणहरू प्रयोग गर्दा कुन संस्करण अपग्रेड गर्ने भन्ने निर्णय गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। त्यो हो, यदि हामी फोकल फोसामा छौं भने, हामी यसलाई 2022, 2024 वा 2025 सम्म प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्छौं, वा Ubuntu को नवीनतम संस्करणमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गर्न सक्छौं। Hirsute Hippo प्रयोगकर्ताहरूको लागि त्यहाँ एक मात्र विकल्प छ: Impish Indri मा प्राप्त गर्नुहोस् जुन गत अक्टोबरमा सुरु गरिएको थियो। २० गतेपछि पनि अपरेटिङ सिस्टमको प्रयोग जारी राख्न सम्भव होला ? हो, निस्सन्देह, अपरेटिङ सिस्टमले समान काम गर्न जारी राख्नेछ, तर यसले अब समर्थन र अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्नेछैन। यसको मतलब एप्लिकेसनहरूले अब नयाँ प्रकार्यहरू प्राप्त गर्दैनन् भन्ने मात्र होइन, तर सुरक्षा त्रुटिहरू पनि कभर गरिने छैन, त्यसैले हामी खतराहरूको सामना गर्न सक्छौं।
अद्यावधिक गर्न हामीले निम्न गर्नुपर्छ:
हामी महत्त्वपूर्ण फाईलहरूको जगेडा गर्छौं।
हामी टर्मिनल खोल्छौं र यो आदेशको साथ अपडेट गर्न कुनै प्याकेजहरू छैनन् भनेर निश्चित गर्दछौं।
हामी अपडेट-प्रबन्धक स्थापना गर्छौं यदि यो पहिले नै स्थापित छैन:
हामी अपरेटिंग प्रणाली पुन: सुरु गर्दछौं।
एकचोटि हामी फेरि फर्क्यौं, हामी टर्मिनल खोल्छौं र यो आदेश लेख्छौं:
हामी यो सन्देश स्वीकार गर्दछौं जुन देखिन्छ।
अन्तमा, हामी स्क्रिनमा देखा पर्ने निर्देशनहरू पालना गर्छौं। जब हामी पुन: सुरु गर्छौं हामी इम्पिश इन्द्रीमा प्रवेश गर्नेछौं।
अर्को विकल्प आईएसओ डाउनलोड गर्नु हो (यहाँ मुख्य संस्करणको), यसलाई Etcher वा Ventoy जस्ता प्रोग्रामहरूसँग पेनड्राइभमा बचत गर्नुहोस् र स्थापना प्रक्रियामा, "अपडेट" छनौट गर्नुहोस्। जे गरे पनि अब गर्नुपर्छ ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu 21.04 भोलि समर्थन समाप्त हुनेछ। जति सक्दो चाँडो अपडेट गर्नुहोस्
नमस्ते, म २०.०४ मा छु, के यो अझै समर्थित छ?
20.04 LTS हो र 2025 सम्म समर्थित हुनेछ।
मेरो प्रयोगकर्ता स्तर, अधिक को लागी दिदैन, धन्यवाद।